नीलाे केरा देख्नुभएकाे छ ? जसकाे स्वाद भेनिला आइसक्रिमकाे जस्तै हुन्छ | Investopaper
नीलाे केरा देख्नुभएकाे छ ? जसकाे स्वाद भेनिला आइसक्रिमकाे जस्तै हुन्छ
हामीहरू केरासंग सानै उमेरदेखि नै परिचित छाैँ र निरन्तर खाँदै आएका छाैँ । केरा कार्वाेहाइड्रेट र सुगरले भरपुर एक मिठाे फल हाे जुन बाह्रै महिना सजिलै पाउन सकिन्छ । हामीले देखिरहेकाे केराकाे बाेक्रा काँचाेमा हरियाे हुन्छ भने पाकेकाे अवस्थामा पहेँलाे रंगमा परिवर्तन हुन्छ ।
सायद तपाइ हामी धेरैलाइ केराकाे रंग नीलाे हुन्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ । के तपाइले नीलाे केरा देख्नु भएकाे छ ? अर्थात यसकाे स्वाद कस्ताे हुन्छ चाख्नु भएकाे छ ? यीनै जिज्ञाशाहरूलाई मेटाउन आज हामी नीलाे केराकाे बारेमा जानकारी गराउँदैछाै ।
यस्ताे नीलाे रंगकाे केरालाइ व्लू जावा बनाना (Blue Java Banana) भनिन्छ । याे केराकाे जात बर्णशंकर विधिबाट तयार गरिएकाे हाे । (Blue Java banana is hybrid of the seeded bananas – Musa balbisiana and Musa acuminata.)
याे जातकाे केरा दक्षिण पूर्बी एशियामा उत्पादन हुन्छ र हवाइमा धेरै प्रख्यात छ जहाँ यसलाई “आइसक्रिम बनाना”काे नामले पुकारिन्छ । केराकाे बाेट १५ देखि २० फिटसम्म अग्लाे हुन्छ । यसकाे राम्राे उत्पादनकाे लागि ४० डिग्री फरेनहाइटकाे तापक्रमलाई उपर्युक्त मानिन्छ ।
यस जातकाे केरालाई फिजीमा ‘Hawaiian Banana’ भनिन्छ भने फिलिपिन्समा ‘Krie’ काे नामले चिनिन्छ । यसैगरि मध्य अमेरिकामा ‘Cenizo’ नामले प्रख्यात रहेकाे छ ।
याे केरामा अन्य केरामा जस्तै विभिन्न पाैष्टिक तत्वहरू त पाईन्छन नै खाँदा पनि अत्यन्तै स्वादिलाे हुन्छ । यसकाे स्वाद भेनिला आइसक्रिमसंग तुलना गरिन्छ भने कति स्वादिलाे हाेला भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । (एजेन्सीकाे सहयाेगमा)
← यस्ता राेगीले भूलेर पनि खानुहुँदैन केरा
युरोपेली सङ्घले न्यून आय भएका देशलाई दश करोड खोप सहयोग गर्ने →